Allgedo.com » 2013 » January » 10
Home » Archive Daily January 10th, 2013
Puntland iyo Maanta By Abdullahi Isim
Waxaa mudadan dambe soo if baxaya olole siyasadeed oo dardar iyo xawli ku socda, kuna wajahan degaanada iyo maamulka puntland, hal ku dhegyo dareen iyo dhiilo loogu gogol xaarayo, Burburin iyo Badbaadin. Balse war badniba ha ii ahaatee ka hor dulcuda qoraalka; Yaa badbaadinaya yaase laga badbaadinayaa puntland? Nuxurka qoralka waxaa halbeeg u noqon doona jawaabaha su’aalahan. Waxaa iga...
Ciidamada Booliska Soomaaliya oo Xabsiga u Taxaabay Weriye Cabdicasiis Koronto, su’aalana weydiiyay weriye kale
Ururka Qaran ee Suxufiyiinta Soomaaliyeed ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay xariga loo geystay weriye Cabdulcasiis Abdinuur Ibrahim (Cabdicasiis Koronto) oo ku xiran xarunta Baarista dembiyada ee CID, iyadoo maxkamadi xarigaas dalban, isla markaasna ku baaqay in si deg deg ah weriyaha xorriyadiisii dib loogu soo celiyo. Weriye Cabdulcasiis Abdinuur Ibrahim (Cabdicasiis Koronto) oo u shaqeeya Radiyaha...
Miraa farmers, traders and consumers have expressed anger with Kenyan authorities for failing to lobby the Dutch government to reverse a decision to ban it despite a one year window before the effective date. The ban was effected as scheduled on January 5. Transporting Miraa to the JK Airport Traders and farmers of the stimulant in Meru, where it is the main source of income, say they are worried...
Kenya oo olole weyn ugu jirta in aanan Qaadka dalka Ingiriiska laga joojin (Daawo Video)
La dagaalanka qaadka ee Ingirriiska oo gebogebo maraya iyo Ergo ka socda Kenya oo ugu baaqay Dowlada Ingriiska in lacagta qaadka ee Ingiriiska laga helo 30% oo ka mid ah lagu dhiso Kaniisado, lagu daabaco Bible laguna fidiyo diinta Masiixiga, sidaas awgeedna aan la joojin qaadka Ingriiska yimaada. Hoos ka daawo Video-ga ka hadlayo baraarujinta la dagaalanka Qaadka iyo Ololaha weyn ee ay dowladda Kenya...